Ambassador Boubacar Diarra Oo Sheegay in Midawga Afrika la Shaqeyn Doonto Dowlada Cusub
Updated About:274 days ago 0
Wakiilka gaarka ah ee xafiiska midawga afrika Ambassador Boubacar Diarra oo shaaciyay in midawga afrika ey la shaqeyn doonto dowlada cusub ee soomaaliya isagoo sheegay in mar walbo ey garab taganyihiin umada soomaaliyeed.
Wasaxaafadeed laga soo saaray Magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in midawga Afrika uu sii wadi doono la shaqeenta dowlada cusub ee Somalia si shacabka Somaliyeed ay ugu baxaan nolol maalmeed ku dhisan nabad iyo amni buuxa.
Bayaankaasi uu Ambassador Boubacar Diarra kasoo saaray Nairobi ayaa ku tilmaamay hanaka siyaasada ee ka soconaya somalia in ay tahay mid taariikhi ah.
“Soomalida waan la shaqeyn doonaa waxana u rajeyneena nabad waarta” sidaasna waxaa yiri Mr Diarra.
Sidoo kale mr Diarra ayaa amanay gudigi ku hawlanaa soo xulista xubnaha barlamanka cusub ee somalia.
Ugu danbeenti waxa uu sheegay in ciidamada Midawga Afrika kaga sugan Somalia AMISOM ay adkeen doonan ammanka caasimadda Muqdisho inta lagu guda jira marxaladaha doorashada guddoomiyaha barlamaanka iyo madaxweynaha dalka Somalia.
Sikastaba Sannad ka hor ciidamadda AMISOM iyo kuwa dawladda ayaa ku qasbay Al-Shabab in ay isaga baxaan Magaalada Muqdisho Caasimadda dalka Somalia.